अहिले प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष चर्को आलोचनामा सार्वजनिक रुपमा नै प्रस्तुत भएका छन् । नेता नेपालले संसदनामा आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले जनताको चाहना अनुरुपको काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । चियापान कार्यक्रम नै गरेर नेताहरुसंग कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सुझाव पनि मागे । खासमा नेपालको ओलीसंगको असन्तुष्टि के विषयमा हो भन्ने विषयमा हामीले उनी पक्षका नेता नेकपाका स्थायी समिति सदस्य डा. बेदुराम भुसालसंग जान्ने प्रयास गरेका छौं । प्रस्तुत छ त्यही कुराकानीको सारसंक्षेप :-
सरकारसंग यहाँहरुको असन्तुष्टि के विषयमा हो ?
सरकारले जनताको चित्त बुझ्ने गरी काम गर्नुपर्ने हो । तर, वर्तमान सरकारले त्यो ढंगले काम गर्न सकेको छैन । शान्ति सुरक्षा भएन, मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण भएन, विकास निर्माणका कुनै राम्रा योजना आएनन, चुनावको बेलामा जति प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो, त्यसअनुसार काम भएन भनेर आमजनताले गुनासो गरिरहेका छन् । हामीले पनि त्यही गुनासो मात्रै गरेर सुध्रन आग्रह गरेका हौं ।
जनताको भावना अनुरुपको काम गर्न नसकेकै हो ?
लामो लडाइँ लडेर देशमा जुन खालको परिवर्तन ल्याइयो, त्यही परिवर्तनलाई व्यवहारमा लागु गर भनेर जनताले एकलौटी बलियो सरकार सञ्चालन गर्ने म्याण्डेट दिएका छन् । बलियो सरकार गठन भएको ६ महिना पुगेर बढी भएपछि अब परिणाम दिने बेला आएको छ ।
वामपन्थीको दुई तिहाइसहितको बलियो सरकार सञ्चालन गर्न मत दिएका बेला जनताको भावना समेटिने गरी, चुनावका बेला जनतासामु जे बोलिएको थियो, त्यसैअनुरूप गरिनुपर्छ । जनताको अपेक्षा त्यही हो, हाम्रो पनि त्यही नै हो । तर, सरकारले सोही अपेक्षाअनुसार नगरेपछि जनतामा निराशा छाएको छ ।
सबैले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । हामी पनि यही समाजका सदस्य हौं । आमजनता जहाँ छन्, हामी पनि त्यहीँ भित्रै छौं, म पनि त्यहीँ छु । त्यसकारण आज जनताले जे भनिरहेका छन, हामी पनि त्यही भनिरहेका छौँ । सरकार सुध्रेर जनताको पक्षमा काम गरोस भन्ने मात्रै हाम्रो अध्यय हो ।
यहाँहरुले सरकारले राम्रो काम गरेन, पार्टीभित्रैबाट सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विकल्पको खोजी सुरु गर्नु भएको हो ?
आजसम्मका कमी–कमजोरीलाई हटाएर सरकारले जनभावना अनुसार काम गर्नुपर्छ । हाम्रो मनाई विसुद्ध त्यही हो । अहिले अर्को कुनै सरकार खोज्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । आवश्यकता पनि छैन । जरुरी त झन हुँदै होइन । कसैले त्यो खोजेको पनि छैन, चाहेको पनि छैन ।
त्यसोभए सार्वजनिक रुपमा नै पार्टी नेतृत्व सम्हाली सकेको र प्रधानमन्त्री भइसकेको नेताले किन आलोचना गर्नु भएको त ?
हामीले सरकारले काम नगर्दा स्थिति बिग्रन लाग्यो, बिग्रन दिनु हुन्न मात्रै भनिरहेका छौ । सरकारले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने सन्दर्भमा केही समस्या भएमा पार्टीमा छलफल गरेर समाधान निकाल्नु पर्छ भनिरहेका छौं ।
यावत् सम्भावना छँदाछँदै दूरगामी नकारात्मक प्रभावबारे जान हुदैन । नेकपाले अहिलेसम्म काम गरेर देखाएको छ, अहिले पनि गर्छ । सरकारले आजसम्मका कमीलाई हटाएर काम गरेर देखाउँनु पर्छ । यो भन्दा अर्को विकल्प सोच्ने र मुलुक नै बिग्रन लाग्यो भनेर आत्तिनु पर्ने बेला भएको छैन ।
पार्टीभित्र नेताहरुबीच देखिएका समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्छ ?
पार्टीभित्र विचार र कार्यशैलीमा विविधता हुन्छ । दुनियाँमा जहिलेदेखि राजनीतिक पार्टी जन्मिए, तबदेखि नै विचारका विविधता देखिँदै आएका छन् । तिनको निराकरणका लागि छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ । त्यसैले त बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको हो ।
सबैको धारणा एउटै हुने भए त बहुमत, अल्पमतको सिद्धान्त नै प्रतिपादन हुने थिएन । नेपालमा विचारमा विविधता नेकपा बनेपछि मात्र भएको हो र ? यो त जबदेखि पार्टीहरू जन्मिए, तबदेखि नै चल्दै आएको छ । फेरि एकपटक विविधता भएपछि सधैँ सबै विषयमा विविधता हुन्छन् भन्ने पनि होइन । बहस र छलफलबाट निकास निकाल्ने पर्यत्न नेतृत्वले गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय नेतृत्वले गुट हेरेर जिम्मेवारी दिने गरेको आवाज पनि कता कता सुनिन्छ नि ?
पार्टीभित्र समूह भएकैले बहस र छलफल हुने हो । एउटा समूहमा भएकाहरू भोलि अर्कै समूहमा पर्न सक्छन् । नेकपा बनेपछि हिजोको समीकरण नहुन सक्छ । त्यसकारण हिजोको आँखाबाट फलानो गुटबाट परे कि परेनन् भन्ने ढंगले हेर्नु हुँदैन । त्यसरी हरेर गर्ने विश्लेषण अधुरो र अपरिपक्व हुन्छ ।
अहिलेको नयाँ अवस्थालाई नबुझी गरिएको विश्लेषण हुन जान्छ । पार्टी भनेको केही बोल्नै नपाउने, भन्नै नपाउने भन्ने हुन्छ र ? पार्टी भनेको त्यस्तो हो र ? पार्टीमा आफ्ना कुरा राख्न पाइन्छ ।
मिडियामा आएजस्तो यो गुटको प¥यो, त्यो गुटको परेन भन्ने ढंगले छलफल भएका छैनन् । हाम्रो छलफल भनेको व्यक्तिले व्यक्ति छान्ने ढंगले पार्टी चल्ने होइन, विधि, पद्धति र मापदण्डका आधारमा संस्थागत ढंगले जाऔँ भन्नेमा हो, हाम्रो जोड त्यसमा हो ।
त्यसोभए पछिल्लो समय नेकपाभित्र देखिएको मुख्य समस्या के हो त ?
एकता गरेर ठूलो बनाइएको पार्टी नेकपालाई कसरी चलाउँछौँ ? भन्ने प्रश्न यतिवेलाको मूल प्रश्न हो । यद्यपि हिजो पनि हामी ठूला पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र) थियौँ । हामीले यो पार्टीलाई निश्चित विधि, पद्धति र मापदण्डका आधारमा संस्थागत निर्णय गर्ने तरिकाले चलाउँछौँ अथवा यो पार्टीलाई व्यक्तिले व्यक्ति छनोट गर्ने विधिबाट चलाउँछौँ भन्ने यतिवेलाको सबैभन्दा मूल प्रश्न हो ।
बाँकी एकता प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने, एकतापश्चात् पार्टीलाई कसरी चलाउने भन्ने प्रश्न अहिलेको मुख्य प्रश्न हो । त्यस प्रश्नमा हामीले विभिन्न ढंगबाट छलफल चलाइरहेका छौँ । त्यही छलफलका क्रममा मापदण्डका कुरा उठिरहेका छन् । सर्कुलर जारी हुँदैमा विधिसम्मत ढंगले काम भएको भन्ने हुँदैन ।
त्यसअघि कुनै मापदण्ड बने कि बनेनन् र त्यस्ता मापदण्डमा टेकेर संस्थागत निर्णय भयो कि भएन भन्ने हेर्नुपर्छ । कसैले निर्देशन र्गयो, त्यही मापदण्ड र विधि भयो भन्ने हुँदैन ।
सचिवालयमा मापदण्डको कुरा टुंगिएको छैन । केही साथीलाई विभिन्न पद (प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव) मा मनोनीत गर्दा पहिला तोकिएको आंशिक मापदण्ड बाहिर गएर निर्णय गरिएको छ । थप मापदण्ड बनाएर जाऔँ भन्ने जुन छलफल चलिरहेको थियो, ती छलफल बीचैमा रोकिए । मापदण्ड नटुंगिई अर्को निर्णय भएकाले केही विवाद सिर्जना भएको हो ।
अहिले देखिएका विवादका विषयमा समाधानको उपयुक्त बाटो के हुन सक्ला ?
व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर समूह र समूह समूह मिलेर पार्टी बन्ने हो । पार्टीले निर्णय लिदाँ सामूहिक रुपमा लिनु पर्छ । व्यक्तिले व्यक्ति छान्ने तरिका संस्थागत हुँदैन । त्यो व्यक्तिगत मात्र हुन्छ । संस्थागत ढंगले निश्चित विधि, पद्धति र मापदण्डका आधारमा जानेबित्तिकै सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन्छ ।
त्यो विधि, पद्धति र मापदण्डभित्र सबै काम पर्छन् र त्यसपछि सिस्टमले काम गर्न थाल्छ । त्यो अवस्थामा कसैले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन । को व्यक्ति कहाँ पर्छ भन्ने ढंगबाट हामीले मापदण्ड निर्धारण गर्छाैं भने समस्या हुन्छ ।
व्यक्ति नहेरी मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने फलानो हुन्छ कि हुँदैन, ढिस्कानो हुन्छ कि हुँदैन भनेर चिन्ता गर्नैपर्दैन । अहिले त विधि, पद्धति र मापदण्डतिर होइन कि फलानो नेता कि ढिस्कानो नेता भन्नेतिर लागेर बिग्रिएको हो ।
स्थितिलाई यो भन्दा बढी बिग्रन नदिई हामीले निश्चित मापदण्ड, विधि र पद्धतिका आधारमा संस्थागत निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसरी जान सकेमा कसैले पनि गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था बन्दैन, काम पनि फटाफट हुन्छन् ।
छलफल गरेर कमी–कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । पहिला विधि, मापदण्ड तयार पार्नुपर्छ । त्यसैको आधारमा काम अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसपछि जो–जो पर्छन, पर्छन, त्यसमा विरोध पनि हुँदैन र गुनासो पनि हुँदैन । राजतिलकका साथमा ।